China အပူချိန်ပန်ကာအတင်းအကျပ်အမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Zhongshan Gastek Home Appliance Company Limited
ဒီ 10L ဖန်သားပြင် panel ကဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်သည်ချက်ချင်း၊ အဆုံးမဲ့၊ On-demand ရေပူကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပန်ကာအားဖိအားပေးသောဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်သည်နံရံပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားပြီးအရွယ်အစားသေးငယ်။ တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။ စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပန်ကာသည်မီးဘေးကာကွယ်ရေး၊ စက်နှိုးခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း၊ အေးခဲစေသည့်ကာကွယ်မှု၊ အပူကာကွယ်မှုစသည်တို့ဖြင့်အတင်းအဓမ္မဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်ကို အသုံးပြု၍ မိသားစု၏လုံခြုံမှုကိုအာမခံနိုင်သည်။
စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်, လျှပ်စစ်ဓာတ်အားသုံးဓာတ်ငွေ့ရေပူပေးစက်, တာဘိုနှင့်အတူ, မျက်နှာပြင် display ကို
â –³T = 25K 10L 12L 13L
အဆင့်သတ်မှတ်အပူအပူ ၂၀KW ၂၄ ကီလိုဝပ် 26kW
Flue ပိုက်အချင်း သံမဏိ, အချင်း: Ï† 60mm / Ï† 90mm
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ 220V သို့မဟုတ် 110V, 50HZ
1. ရေပူအပူချိန်တည်ငြိမ်ပြီးကြီးမားသောအတက်အကျမရှိခြင်း၊ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သောရေချိုးခြင်းအတွေ့အကြုံ၊
၂.၂ ဗို့ / ၁၁၀ ဗို့အားဖြင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အား၊ ဘက်ထရီမရှိဘဲ၊
3. ရေနည်းသောရေဖိအားစတင်ခြင်း၊ မြင့်သောအဆောက်အအုံ၊ နေအိမ်ဟောင်း၊
4. စွမ်းအင်ချွေတာခြင်း၊ အပူစွမ်းအင် ၈၈% အထိ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေမှု၊
5. အောက်စီဂျင်ကင်းအပူပေးစက် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာဖော်ရွေမှု၊
လက်ကိုင်အိတ်၊ လွယ်ကူစွာလည်ပတ်နိုင်ခြင်း၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း;
7.Big ရေစီးဆင်းမှု (ရရှိနိုင် 10L-13L);
flue အမျိုးအစားထက် 8.Safer ။ လောင်ကျွမ်းရန်အတွက်အပြင်ဘက်လေကိုသုံးပါ။ ၎င်းကိုရေချိုးခန်းအတွင်းတပ်ဆင်နိုင်သည်။
၉။ လုံခြုံရေးကိရိယာများ၊ မီးလျှံ၊ ရေဖိအား၊ အပူ၊ ခြောက်သွေ့မှု၊ လေဖိအား၊
hot Tags:: စဉ်ဆက်မပြတ်အပူချိန်ပန်ကာအတင်းအဓမ္မအမျိုးအစားဓာတ်ငွေ့ရေအပူပေးစက်, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းသူ, စက်ရုံ, တရုတ်နိုင်ငံတွင်လုပ်သည်, လက်ကားဈေးပေါပေါစျေးလျှော့စျေးစျေးနိမ့်စျေးနှုန်းလျှော့စျေး, CE, စျေးနှုန်း, နောက်ဆုံးပေါ်, အဆင့်မြင့်